သဇင်ထူးမြင့်နဲ့ မင်းခန့်ကိုတို့ရဲ့ ရိုက်ကွင်းနောက်ကွယ်ကအခွီဗီဒီယိုလေး – အနုပညာရပ်ဝန်း
သဇင်ထူးမြင့်ကတော့ အနုပညာမျိုးဆက်ကဆင်းသက်လာတဲ့ မင်းသမီးတစ်လက်ဖြစ်သလို ချစ်စရာကောင်းတဲ့အလှပိုင်ရှင်လေးဖြစ်တာကြောင့် ပုရိသတွေဝန်းရံတဲ့မင်းသမီးတစ်လက်ဖြစ်ပါတယ်။ သဇင်ထူးမြင့်နဲ့အတူ ပရိသတ်တွေသတိထားမိသေးတဲ့ သရုပ်ဆောင်မင်းခန့်ကို ကိုလည်း ပရိသတ်တွေသိကြမှာပါ။ သူတို့တွေကတော့ တကယ့်ကိုရင်းနှီးတဲ့ သူငယ်ချင်းကြီးတွေလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
မင်းခန့်ကိုကတော့ ရိုက်ကွင်းနောက်ကွယ်က ရယ်စရာကောင်းတဲ့ အခိုက်အတန့်လေးတွေကို ပရိသတ်တွေကို မျှဝေလာခဲ့ပါတယ်။ သဇင်ထူးမြင့်ကတော့ သူ့ရဲ့ဖေ့ဘွတ်ခ်မှာ “ရိုက်ရင်မနည်းတည်နေရတာ နောက်ပိုင်း Short Film လေးတွေတင်ရင် bts ပါတင်ပေးမယ်။” ဆိုပြီးတော့ရေးသားထားပါသေးတယ်။ ဗီဒီယိုထဲမှာတော့ သဇင်ထူးမြင့်ကသရုပ်ဆောင်နေတာကို မင်းခန့်ကိုက အခွီတွေပြောပြီးနောက်ပြောင်နေတာကြောင့် သရုပ်ဆောင်မရဘဲ ရယ်နေရတာပါ။
Behind the Scene ??????တစ္ခါ တစ္ခါ႐ိုက္ဖို႔ …ရီေနရတယ္ Secretary ကို ..ေအာ္ စာေရးမ တ့ဲ ??
Posted by Min Khant Ko on Sunday, 19 July 2020
မင်းခန့်ကိုကတော့ သဇင်ထူးမြင့်ရဲ့သူငယ်ချင်းလည်း ဖြစ်သလို ဆေးထိုးကြမ်းသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အင်တာဗျူးတွေမှာတော့ ပုရိသတွေဝန်းရံမှုများတဲ့ သဇင်ထူးမြင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီး အပြင်မှာကဂျီကဂျောင်ကျတယ်ဆိုပြီးတော့ ဖောက်သည်ချခဲ့ပါသေးတယ်။ အခွီဗီဒီယိုလေးကိုတော့ ပရိသတ်တွေကိုမျှဝေလိုက်ပါတယ်နော်…
Source : MinKhantKo,ThazinHtooMyint